Otu esi ejikọ WPA / WPA2 na Ubuntu | Site na Linux
A mfe google search Ahụmahụ onwe m gosipụtara: ijikọ na WPA / WPA2 na Ubuntu nwere ike ịbụ ezigbo isi ọwụwa. Gịnị bụ ihe ngwọta ya? Ọ dị mma, ruo ugbu a enweghị oke ma ọlị maka ịhazi Wi-Fi ụlọ m na nzuzo WEP, kama WPA ma obu WPA2. Nsogbu bụ na ọ bụ ezie na ọ bụghị ọtụtụ geeks ma ọ bụ "hackers" maara otú e si eme ya, e gosiri WEP netwọk dị oke ngwangwa. Hey! Enwere ọbụna vidiyo na Youtube na-akọwa otú e si 'anataghị ikike' ha. Ngwọta ahụ, ọ bụ ezie na ọ kachasị mma, rụụrụ m ọrụ… ruo ugbu a. N'ụbọchị ọzọ, agara m na-aga n'ọfịs ma ebe ahụ ha nwere wifi mana WPA2. Nnukwu bụ nkụda mmụọ m mgbe m chọpụtara na nke ka njọ bụ iwe m n'echiche na Ubuntu ka na-enweghị ike ijikọ na netwọk na ụdị nzuzo ahụ.
N'ikpeazụ, mgbe ọnwa ole na ole nyochachara, enwere m ike ijikọ. Nke a bụ nkọwa nke otu m si mee ya.
Nke mbu, aghaghi m ikwuputa nke ahu Anaghị m eji ọkwọ ụgbọala n'efu maka wifi (dabere na Atheros) nke laptọọpụ m (Compaq Presario CQ60-211DX). O di nwute, onye ọkwọ ụgbọala nweere onwe ya, maka ihe ndị m na-aghọtabeghị, mere ka faịlụ mgbasa ozi ọ na-akpọ na-ada ụda ma vidiyo ahụ ka njọ. Ghara ikwu vidiyo vidiyo. Ha yiri ezigbo. Ozugbo m gbanwere wifi ọkwọ ụgbọala, ihe niile edozila (WTF !!).
Ka o sina dị, dị ka m kwuru, ndị a bụ usoro m gbasoro. Emeela m nke mbụ n’ime nke atọ ogologo oge gara aga, ọbụlagodi mgbe m na-eji WEP na Wi-Fi m, maka obere nsogbu m kọwara ugbu a.
Windows wifi ọkwọ ụgbọala echichi.
1) wụnye ndiswrapper-nkịtị y ndisgtk
sudo apt-get wunye ndiswrapper-common ndisgtk
2) Gaa na Sistemụ> Nchịkwa> Windows Wireless Drivers. Wụnye ọkwọ ụgbọala nke Windows xp m, na m ikpe nke 64 ibe n'ibe.
3) na /etc/modprobe.d/
3.a) Na faịlụ blacklist.conf: tinye blacklist ath5k & blacklist ath9k (na usoro dị iche)
3.b) Na faịlụ blacklist-ath_pci: tinye ath_pci
sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist-ath_pci
Na 1 na 2 ihe anyị mere bụ ịdebanye aha onye ọkwọ ụgbọala Windows ka Ubuntu anyị ga-eji mgbe ị na-ebido. Na 3, anyị mere ụzọ ọzọ, anyị nwere nkwarụ wifi ọkwọ ụgbọala n'efu ka ọ ghara ịmalite mgbe akpụkpọ ụkwụ Ubuntu.
Njikọ na WPA / WPA2
1) wụnye wpa_supplicant
sudo apt-nweta wpasupplicant
2) Na-esote, ihe anyi ga eme bu n'ihi a bug in ndiswrapper. O doro anya na wpa_supplicant anaghị agba ọsọ na mkpa dị mkpa. Ya mere, oge ọ bụla anyị chọrọ ijikọ, anyị ga-emepe ọnụ ma dee
sudo renice + 19 $ (pidof wpa_supplicant)
Ozugbo e mechara, gbalịa jikọọ na netwọk na ihe ezoro ezo WPA / WPA2.
3) nwere ike ịnwale oge ole na ole (agwara m nzọụkwụ 2) ruo mgbe ọ ga-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na oge isii ma ọ bụ ugboro 6 ọ naghị arụ ọrụ, hazie faịlụ nhazi wpa_supplicant ka ọ dabaa njirimara nke netwọkụ ị na-achọ ijikọ.
Amaara m, ọ bụghị ezigbo azịza mana ọ na-arụ ọrụ. Echere m na ihe isi ike na wpa_supplicant na-ebilite si bug in ndiswrapper. Ma ọ bụghị ya, enwere m echiche na ihe niile ga-adị mfe. N'aka nke ọzọ, njikọ na netwọkụ WPA / WPA2 kwesịrị ịdị "dị ọcha" ma ọ bụ "nghọta" maka onye ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Otu esi ejikọ WPA / WPA2 na Ubuntu
Aga m anwa, ọ na-ejikọ m nke ọma na Ubuntu, mgbe ọ na-ekwusi ike, mana m na-anwale usoro azụ na enweghị ihe ọ bụla ma ọlị, ka anyị hụ, ekwesịrị inwe nkedo maka ahụhụ ahụ.
Miro Video Ihe Ntụgharị, iji tọghata videos mfe